लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काजाक किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरून्डी किर्गिज किलुबा किसी किसोंगे कोंगो कोरियन क्याटालान क्रिओ क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गुजराती ग्रीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चुभास चेक जर्जियन जर्मन जान्डे जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ डच डेनिश ड्रेहु तामिल तेलगु त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाह्वाटल (सेन्ट्रल) नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मझतेक (हुआट्ला) मराठी मल्यालम माम माया मालागासी माल्टिज मिहे मूर म्यानमार म्यासडोनियन युक्रेनियन रूसी रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा लुन्डा वलिसियन वोलाइटा शिलुबा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) साङ्गो सिंहला सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिलिगेनोन
घनिष्ठ साथीहरू एकअर्कासित नियमित रूपमा कुराकानी गर्छन्‌; चाहे भेटेर होस् अथवा फोन, इमेल, भिडियो वा चिठीमार्फत। त्यसैगरि ईश्वरसित घनिष्ठ हुन हामीले उहाँसित नियमित रूपमा कुराकानी गर्नु जरुरी छ। हामी कसरी त्यसो गर्न सक्छौं?
हामी प्रार्थनामार्फत यहोवासित कुराकानी गर्न सक्छौं। तर ईश्वरलाई प्रार्थना गर्नु भनेको साथीसित गफ गर्नुजस्तो मात्र त होइन। प्रार्थना गर्दा हामीले ब्रह्माण्डकै सर्वोच्च व्यक्ति अनि हाम्रा सृष्टिकर्तासित कुराकानी गरिरहेका हुन्छौं भन्ने कुरा मनमा राख्नुपर्छ। यसो गर्दा हामी ईश्वरलाई गहिरो आदर देखाउँदै प्रार्थना गर्न उत्प्रेरित हुन्छौं। ईश्वरले हाम्रो प्रार्थना सुन्नुभएको चाहन्छौं भने हामीले केही आवश्यकताहरू पनि पूरा गर्नै पर्छ। त्यसमध्ये तीन वटा आवश्यकताबारे अब हामी चर्चा गरौं।
पहिलो, हामीले ईश्वर यहोवालाई मात्रै प्रार्थना गर्नुपर्छ; येशू अथवा कुनै “सन्त” वा मूर्तिलाई होइन। (प्रस्थान २०:४, ५) बाइबलमा स्पष्टै यसो भनिएको छ: ‘हरेक कुरामा प्रार्थना, उत्कट बिन्ती र धन्यवादका साथ आफ्नो निवेदन ईश्वरसमक्ष जाहेर गर।’ (फिलिप्पी ४:६) दोस्रो, हामीले ईश्वरको छोरा येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्नुपर्छ। येशू आफैले यसो भन्नुभएको थियो: “मबाहेक अरू कसैद्वारा कोही पनि बुबाकहाँ जान सक्दैन।” (यूहन्ना १४:६) तेस्रो, हामीले ईश्वरको इच्छासित मेल खाने विषयहरूमा मात्र प्रार्थना गर्नुपर्छ। बाइबल भन्छ: ‘ईश्वरको इच्छाबमोजिम हामीले जेसुकै मागे पनि उहाँले हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ।’ *—१ यूहन्ना ५:१४.
घनिष्ठ साथीहरू एकअर्कासित नियमित रूपमा कुराकानी गर्छन्‌
हो, दुई जना व्यक्तिमध्ये एक जना मात्रै एकोहोरो बोलिरहन्छन्‌ भने उनीहरू घनिष्ठ साथी बन्न सक्दैनन्‌। साथीहरूबीच दोहोरो कुराकानी भएझैं ईश्वरले हामीसित बोल्नुहुँदा हामीले उहाँको कुरा सुन्नुपर्छ। त्यसोभए उहाँ कसरी हामीसित बोल्नुहुन्छ?
आज ईश्वर यहोवा हामीसित आफ्नो वचन बाइबलमार्फत “बोल्नुहुन्छ।” (२ तिमोथी ३:१६, १७) हामी किन यसो भन्न सक्छौं? मानिलिनुहोस् तपाईंले एक जना घनिष्ठ साथीबाट चिठी पाउनुभयो। साथी आफ्नो साथमा नभए तापनि तपाईंलाई त्यो चिठी पढ्दा तिनीसँगै कुराकानी गरेझैं महसुस हुन्छ नि, होइन र? त्यसैगरि बाइबल पढ्दा तपाईंले यहोवाको कुरा सुनिरहनुभएको हुन्छ। यस पत्रिकाको सुरुको लेखमा उल्लेख गरिएकी जिना भन्छिन्‌: “ईश्वरले हामीलाई साथीको रूपमा हेर्नुभएको चाहन्छौं भने उहाँले दिनुभएको ‘चिठी’ अर्थात्‌ बाइबल जाँच्नै पर्छ। दिनदिनै बाइबल पढ्दा म ईश्वरसित घनिष्ठ हुन सकेकी छु।” के तपाईं पनि दिनहुँ यहोवाको वचन बाइबल पढेर उहाँको कुरा सुन्नुहुन्छ? यसो गर्नुभयो भने तपाईं उहाँसित घनिष्ठ हुन सक्नुहुन्छ।
^ अनु.5प्रार्थना गरेर ईश्वरसित कसरी नजिक हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा थप जानकारीको लागि यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले वास्तवमा के सिकाउँछ? किताबको अध्याय १७ हेर्नुहोस्।